Maxaad Tareen Ride waa habka ugu fiican si aad u aragto Italy | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > Maxaad Tareen Ride waa habka ugu fiican si aad u aragto Italy
Maxaad Tareen Ride waa habka ugu fiican si aad u aragto Italy
Waxaad leedahay xamuulka ah fursadaha marka aad go'aansato sida ay u safraan. Sida magaca movie caanka ah, waxaad tagi kartaa via diyaarado, tareenada, iyo baabuurta. Marka ay timaado in qaadashada a safar of Italy, si kastaba ha ahaatee – waxaa jira faa iidooyin qeexan oo aad ku raaceyso tareen raacid.
TARIINKA kortaan raaxada
kid ku riyaaqayaa tareenku a
kuraasta Airline aadka yihiin gaaban on legroom, oo looma ogola in aad u isticmaashid qalabka elektarooniga ah inta lagu guda jiro duushay oo soo degtey. Taas macnaheedu waxa weeye duulimaadyada gaaban, aad ku egtahay in aad kursiga yar in inta badan ee horyaalka iyada oo aan wax jeediya lahayn ee ay bixiyaan casriga ah iyo technology, tani waa mid xaqiiqdii kala duwan ka kortaan tareen.
Baabuurta ayaa inta badan siiyaan meel wax yar ka badan, laakiin kortaan wuxuu noqon karaa finan iyo qaar ka mid ah dadka ay dhibaatadu ka bukaanka baabuur – gaar ahaan on a safar dheer marka aad rabto in aad akhrido ama ciyaaro kulan. tareen raacid, dhanka kale, waxay bixisaa kuraasta raaxo iyo gaadiid siman – guraynin by duushay dheer iyo jeer soo degtey, mar kale waayo-aragnimo ka duwan ka kortaan tareen.
Marka safarka by tareenku ee Italy, waxaad isku dayi kartaa mid aad u kuraasta ergonomic raaxo iyo weliba qolalkii hoose dhawaaqa-uga cadhooday ee cusub Xawaare sare Frecciarossa 1000 tareen.
Naples si Tareenadu Genoa
Turin si Tareenadu Genoa
Rimini in Tareenadu Genoa
Siena si Tareenadu Genoa
RA'YIGA TARIINKA kortaan
safarka Air bixisaa views anteenada cajiib ah, laakiin kaliya waqti gaaban ilaa diyaarad kori fog kor ku xusan baadiyaha. Inkasta oo jidka weyn ma yihiin inta badan picturesque, wadooyinka u dhexeeya magaalooyinka ku siin karaan views qurux badan. Si kastaba ha ahaatee, darawalka in uu diirada saaro jidka, sidaas oo kaliya rakaab kale oo la yaabsanahay karaa hills rogid ama badda ee quruxda badan. Tareen kortaan ogolaanaya dhammaan dadka safarka ah si ay ugu raaxaystaan ​​quruxda dabiiciga ah ee ka baxsan daaqadaha.
Mid ka mid ah waxyaabaha aad ka dadka waxa ay maqlaan kii u safray Italy by rail waa sida qurux badan tahay in safarka tareenka inta lagu jiro qorrax.
sodcaalladoodii oo tareen ee Italy ayaa si gaar ah u qurux badan si loo hubiyo in ka dhigi aad u safarto weheliyaan Terra Cinque u dhexeeya Levanto iyo La Spezia ama safar hoos xeebta bari ka Rimini in Catania.
safarka tareenka kortaan waa ka badan ayaa la awoodi karo badan duulaya. kirada Car waxay noqon kartaa kharash-ool ah, laakiin marka aad ku dar caymiska, gaaska, iyo waqtiga (dheeraad ah oo waqti driving ka dhigan more habeen hoyga) safarkaaga ka heli kartaa qaali soomi. Waxa kale oo aad qaadan kartaa tareenku habeen, hab in aad bixiso guryaha iyo gaadiidka ee mid ka mid ah.
Rimini in Tareenadu La Spezia
La Spezia in Tareenadu Levanto
markii qorraxdii dhacday oo buuraha ka badan
Tareenadu dhaadheer uga yar carbon qiiqa badan diyaarado ama baabuurta. Sida laga soo xigtay baadhitaan, gawaarida ayaa soo labanlaabaya xaddiga CO2 tareenadu sameeyaan.
Diyaaradaha keeni ugu saamaynta deegaanka. Marka aad dooranayso dhexeeya duulaya ama tareen, waxan ka fiirsada: diyaaradaha ay isticmaalaan inta badan ay Shidaalka duushay oo soo degtey. Iyada oo ay tani evens in ka badan dhererka duulimaad dheer-shixnad, waxaa loola jeedaa shidaalka badan oo dheeraad ah halkii kiiloomitir waxaa loo isticmaalaa duulimaadyada gaaban, sida safarka gudahood Italy.
Waxaa intaa dheer in, dadka intooda badan u safraan garoonka baabuur ama taksi, isagoo intaa ku daray kaarboonka oo dheeraad ah si ay total. Taas macnaheedu waxa weeye waxa macno deegaanka ka badan in ay qaataan tareenku Intercity ah ka badan diyaarad gaaban ama drive a.
Marka laga soo tago batroolka iyo naaftada isticmaalka, sidoo kale waxaa jira buuq iyo wasaqowga hawada, iyo sidoo kale baahida loo qabo in baabuurta la dhigto ee magaalooyinka in mar hore ka maqan goobaha akhtarka ah.
TARIINKA kortaan SI AMMAAN AH
Markaad cabirayso dhimashooyinka halkii mayl rakaab ah, duulaya uga ammaan badan yahay driving. Halkan sababta: waxaa jira fursad yar qalad aadanaha, waana wax aad u dhib badan in la noqdo duuliye marka loo eego helitaanka laysanka darawalnimada. Qaado galay xaaladda waddada account iyo daal on drives dheer, Way fududahay in la arko sababta doorashada diyaarad waa ammaan badan baabuur.
Marka la barbar dhigo tareenada, si kastaba ha ahaatee, diyaarado ma yihiin kuwo si nabadgelyo ah. Tareenada u safri wadada xawaare gaabis ah, taasoo la micno ah waxaa jira fursad yar ee daryaan marka loo eego diyaaradaha. Xaaladda kala-guurista, ka xawaare gaabis ah macnaheedu halis yar.
Florence si Tareenadu Rimini
Rome si ay Tareenadu Rimini
Milan in ay Tareenadu Rimini
Venice in Tareenadu Rimini
haadka An wado banaan celcelis guuro ku saabsan 2,500 dadka saacadiiba – halka line a tareen caadiga qaadi karaan 50,000 dadka saacadiiba. Taas ayaa ka dhigaysa safarka tareenka kortaan xooga dhakhso badan wadista, gaar ahaan marka aad qodob ee qunyar socda gaadiidka, joojiyo waddooyinka, nalalka gaadiidka iyo markooda qaldan lama huraan. On top of in, darawalka uu leeyahay in ay diiradda saaraan waddada, si ay u noqon doonaa awoodin inay wax akhriyaan, waxbarasho, hurdo, ama shaqo.
Dayuurada masaafo dheer laga yaabaa in si ka dhaqso badan u safraya tareen, laakiin masaafo gaaban, safarka hawada wax ku badbaadin waqtiga. First, aad u baahan tahay si aad u hesho garoonka diyaaradaha – inta badan xaaladda ka fog meelaha la deggan yahay. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in ay jiri ugu yaraan saacad markii duushay ka hor si loo hubiyo iyo maraan dhinaca ammaanka. Haddii aad hubi boorsooyinka, aad u baahan doontaa in ku sugnaa ugu WAYDAARKA ah. Iyo in badan hortooda oo dhan kasta dib u dhac duulimaadka ama socod ama baska u dhexeeya boosteejada garoonka diyaaradaha iyo irdaha.
Qorraxda iyo tareenka
Garoomada waxaa inta badan ku sugnaa magaalada dibaddeeda, taasoo la micno ah marka aad dalka, waxaad weli u baahan doontaa in aad baabuurka qaado, baska, ama tareen ku soo gala magaalada. Marka ay timaado in arkaya indhaha ka, waddooyinka xarumaha magaalada la ciriiriga karo iyo adag tahay in ay helaan baabuur by, sidaas darteed qaadashada tareen ka dhigaysa badan oo dareen in goobaha magaalooyinka.
Raadinta si ay u iibsadaan tikidhada tareenku kula jiro qiima jaale? Booqasho SaveATrain.com to helaan heerka tareen jaban.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
deeggaanka u fiican longtrainjourneys tareen safarka travelitaly
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe